Xog: Kadib Xoosh Jabriil, yaa xiga oo baarlamanka uu xilka ka qaadi doonaa? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Kadib Xoosh Jabriil, yaa xiga oo baarlamanka uu xilka ka qaadi...
Xog: Kadib Xoosh Jabriil, yaa xiga oo baarlamanka uu xilka ka qaadi doonaa?
Muqdisho (Caasimada Online) – Baarlamanka Soomaaliya ayaa la filayaa inay toddobaadkan gudihiisa cod u qaadaan oo ay xilka ka qaadaan wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil, oo ay ugu carrodeen markii uu faro-gashtay dood ka dhex oogneyd maxkamadda sare iyo baarlamanka.
Dadaallo uu sameeyey madaxweyne Farmaajo oo la rabay in lagu badbaadiyo ayaa socon waayey, waxaana guddoomiyaha baarlamanka Jawaari uu sheegay in xildhibaanada diidan ay aad u badan yihiin.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in kadib Xoosh Jabriil, baarlamanka ay cod u qaadi doonaan, islamarkaana xilka ka qaadi doonaan taliyaha nabad-sugidda Cabdullaahi Sanbaloolshe.
Xildhibaanada ayaa ka carreysan hadal uu Sanbaloolshe ku weeraray xildhibaanada, si gaar ahna Mahad Salaad, islamarkaana uu ciidamo hub raadinaya u diray guriga xildhibaan Yuusuf Kabaale.